ကျွန် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား အမည်ဖြင့် ရိုက်ကူးခွင့် မပြုခဲ့ဘဲ ရိုက်ကူးခဲ့သောကြောင့် ရှေးဟောင်း သုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက် ဦးစီးဌာနက တရားစွဲမည် ဟုဆို: ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၂၂
M-Bwel (Online Editor) Website URL: 23
Jun Published in World News Be the first to comment! အမေရိကန် ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်တွင် အပူလှိုင်းဖြတ်၊ နှစ်ဦးသေဆုံး လော့စ်အိန်ဂျလိစ် ၊ ဇွန် ၂၂
အမေရိကန် ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်တွင် ပြင်းထန်သောအပူလှိုင်းဖြတ်သဖြင့် သက်ကြီးရွယ်အို နှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့သည်ဟု ဇွန် ၂၂ ရက် သတင်းများအရသိရသည်။ အပူချိန် ၁၅ဝ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိမြင့်တက်ခဲ့သဖြင့် ဒေသခံများကိုနေအိမ် ၌နေထိုင်ရန်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး လေယာဉ်ခရီးစဉ်အချို့ပယ်ဖျက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ပြီးခဲ့သည် ဇွန် ၁၉ ရက်မှစ၍ အပူလှိုင်းဖြတ်သန်းခဲ့၍ သုံးရက်အတွင်းနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့သည်။ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတောင်ပိုင်း Santa Clara ကျေးရွာရှိ အသက် (၈၇) နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး နှင့်အိမ်ရာမဲ့အသက် (၇၂) နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးသေဆုံးခဲ့သည်ဟု San Jose Mercury သတင်းဌာနက ပြောသည်။
Jun Published in World News Be the first to comment! ကက်ရ်ှမီးယားဒေသတွင် သူပုန်သုံးဦးကို အိန္ဒိယ စစ်တပ်က သုတ်သင် ဆရီနာဂါ၊ ဇွန် ၂၂
အိန္ဒိယပိုင်ကက်ရ်ှမီးယားဒေသတွင် ဇွန် ၂၁ ရက်ညပိုင်းက သူပုန်များဟုယူဆရသူများနှင့် အစိုးရစစ်တပ်တို့ အပြင်းအထန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြရာ သူပုန်သုံးဦးကို သုတ်သင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း အိန္ဒိယစစ်တပ်က ဇွန် ၂၂ ရက်တွင် ပြောကြားလိုက်သည်။စစ်တပ်နှင့်ရဲ တန်ပြန်သူပုန်တိုက်ဖျက်ရေးအထူးတပ်တို့သည် လူနေအိမ်နယ်မြေတစ်ခုကိုဝိုင်းထားခဲ့ကြကြောင်း၊ အဆိုပါနေရာ၌ သူပုန်များပုန်းအောင်းနေသည်ဟု ယူဆ၍ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုနေရာ၌ပင် ပြင်းထန်သော တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ ကြောင်း၊ နေအိမ်များမှ လူများထွက်လာကာ အိန္ဒိယလက်အောက်မှ လွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပါဟု အော်ဟစ်ခဲ့ကြကာ ခဲများဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြ ကြောင်း၊ သူပုန်များလွတ်မြောက်စေရန် ကူညီခြင်းဖြစ်ကြောင်း စစ်တပ်က ပြောခဲ့သည်။
Jun Published in World News Be the first to comment! အီရတ် မိုဆူးလ်တွင် ပြင်သစ် ဂျာနယ်လစ် တစ်ဦး သေဆုံး၊ နှစ်ဦးဒဏ်ရာရ ပဲရစ်၊ ဇွန် ၂ဝ
အီရတ်နိုင်ငံ မိုဆူးလ်မြို့တွင်သတင်းယူနေသော ဗီဒီယိုသတင်းထောက်တစ်ဦး မိုင်းဗုံးပေါက်ကွဲသဖြင့်သေဆုံးခဲ့သည်ဟု ဇွန် ၂ဝ ရက်တွင် ပြင်သစ်ရုပ်မြင်သံကြားကပြောသည်။ အီရတ်နိုင်ငံ၏ ဒုတိယအကြီးဆုံး မိုဆူးလ်မြို့တွင် မိုင်းဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ပြင်သစ်ဗီဒီယိုသတင်းထောက် Stephan Villeneuve နှင့် အခြားပြင်သစ်သတင်းထောက်နှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း၊ ဇွန် ၁၉ ရက်တွင် ကာ့ဒ်သတင်းထောက် Bakhtiyar Addad သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ပြင်သစ်ရုပ်သံဌာနနှင့် နယ်စည်းမခြားသတင်းထောက်များအဖွဲ့က ဇွန် ၂ဝ ရက်တွင်ပြောသည်။
StartPrev1234...678910Page 1 of 2884 Latest Articles ကမ္ဘာပေါ်မှာ ၁ဝ မိနစ်တိုင်း ကလေးတစ်ဦးဟာ နိုင်ငံမဲ့အနေနဲ့ မွေးဖွားလာတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂက တွက်ချက်ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အနေအထား အရ နိုင်ငံသားရပိ...23-06-2017 Hits:39 Article လူဘုန်းမြတ် နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၂၂
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံရုံးမှ သံမှူး Mr. Yang Shouzheng သည် နေပြည်တော်၌ မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ြ...23-06-2017 Hits:30 Business DT ဘိုင်ယန်မြူးနစ်မှ အဓိကတိုက်စစ်မှူးဖြစ်သူ လီဝန်ဒေါစကီး၏အပြောင်း အရွှေ့နှင့်ပတ်သက်၍ တရားမဝင်သတင်းထုတ်ပြန်မှုများရှိနေခဲ့သည့် ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ် မန်ယူနှင့်...23-06-2017 Hits:47 Sport WKM ဒူးဒဏ်ရာကြောင့် အနားယူနေရပြီး မန်ယူအသင်း၏သက်တမ်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် ကမ်းလှမ်းခြင်း မခံခဲ့ရသည့် တိုက်စစ်မှူးအီဘရာ ဟီမိုဗစ်ခ်ျသည် အမေရိကန်မေဂျာလိဂ်သိ...23-06-2017 Hits:38 Sport WKM Business Info